သင်္ကြန် ပြီးချိန်တွင် မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ် နန်းဖာလုံဈေး၌ အရောင်းအဝယ် ကောင်းမွန်နေပြီး မီးေ? - Yangon Media Group
တမူး၊ ဧပြီ ၂၂
မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး တမူးမြို့ နန်းဖာလုံဈေးတွင် သင်္ကြန်ကာလအပြီး တစ်ဖက်နိုင်ငံနှင့် အရောင်းအဝယ်ကောင်းမွန်လာကာ မီးလောင်ဆုံးရှုံးသွားသည့် ဈေးဆိုင်ခန်းများကိုလည်း ယာယီဈေးဆိုင်ခန်းများတည်ဆောက်၍ ဈေး ဆိုင်များ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း တမူးမြို့ စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဧပြီ ၂ဝ ရက်တွင်ပြောသည်။
”ဧပြီလဆန်းကစလို့ မီးဘေးသင့်ခံခဲ့ရတဲ့ ဈေးဆိုင်ရှင်တွေကို ဈေးဆိုင်ခန်းတွေ ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုသင်္ကြန်ပြီးချိန် မှာ တမူးနယ်စပ်ဈေးမှာ အရောင်းအဝယ် ကောင်းမွန်နေပါတယ်။ တစ်ဖက်နိုင်ငံက အရောင်းအဝယ်သမားတွေလည်း ဆင်းလာတဲ့အတွက် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်” ဟု ၎င်းကပြောကြားသည်။ တမူးနယ်စပ် နန်းဖာလုံဈေးသည် ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက် ညပိုင်းက မီးလောင်ခဲ့မှုကြောင့် ဈေးဆိုင်ခန်း ၅၃ ခန်း မီးလောင်ပျက်စီးဆုံး ရှုံး ခဲ့ပြီး ယခုအခါ တစ်ခန်းလျှင် ၁ဝ ပေပတ်လည်အကျယ်ရှိ ယာယီဈေး ဆိုင်ခန်းများကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ မတည်လှူဒါန်း ငွေကျပ်သိန်း ၂၁ဝ၊ ကျန်အလှူရှင်များ၏ ထည့်ဝင်ငွေကျပ် ၁ဝ သိန်း တို့ဖြင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးခဲ့သည်။
နန်းဖာလုံဈေးကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်တစ်ကြိမ် မီးဘေးသင့်ခဲ့သည့်အတွက် ယခုအကြိမ်မီးဘေးသင့်မှုမှာ ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ကာ နယ်စပ်နန်းဖာလုံဈေးတွင် ဈေးရုံ ပေါင်း ၂၁ ရုံ၊ ဈေးဆိုင်ခန်းပေါင်း ၁ဝဝဝ ကျော်ရှိသည်။ ယခုသင်္ကြန်ပြီးရက်ပိုင်း နယ်စပ်နန်းဖာလုံဈေးတွင် နန်းဖာလုံ အမည်စုံပစ္စည်းများနှင့် ချင်းတွင်းမြစ်ရိုးဘက်မှ လာရောက်ရောင်းချသည့် ငါးကျပ်တင်ခြောက်၊ ကလေး၊ ချင်းတောင်ဒေသမှထွက်သည့် မျောက်ငိုသီး၊ မုံရွာ၊ မန္တလေးနှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဘက်မှ လာသည့် ကွမ်းသီးနှင့် အုန်းသီးတို့ အရောင်းသွက်လျက်ရှိပြီး သွင်း ကုန်အဖြစ် အိန္ဒိယနိုင်ငံထုတ် ဆိုင်ကယ်၊ ဆိုင်ကယ်အပိုပစ္စည်း၊ ဆေး ပစ္စည်း၊ အထည်အလိပ်တို့ အရောင်းအဝယ်သွက်ကြောင်း သိရသည်။
ချင်းပြည်နယ်ရှိ နယ်စပ်ကျေးရွာများတွင် အစာအိမ်နှင့် သွားပိုးစားရောဂါများ အများဆုံးဖြစ်ပွ?
ဒေါ်နယ်ထရန့်၏ အီရန်ကို ပိတ်ဆို့ အရေးယူခြင်း မအောင်မြင်နိုင်သည့် အကြောင်း ငါးခု